SC7 Serials Mvura Meter
Yakananga kuverenga ultrasonic mvura mita inoshandiswa kuyera, kuchengetedza uye kuratidza kuyerera kwemvura.
Chikumbiro chekushandisa: Tap-mvura pombi net system
Ultrawater Serials Ultrasonic Mvura Meter
1. Hapana chikamu chinofamba, Minimal kuyerera kuraira.Kutsungirira chokwadi.
2. Double channels ultrasonic transit-time sensor for High accuracy uye kushanda kwakavimbika.
3. Inogona kuyera uye kuchengetedza zvose zviri mberi kuyerera uye kumashure.
4. Active kuvuza, kuba, kudzoka shure, kukuvadzwa kwemamita/tamper, chiyero chekuyerera, uye chiratidzo chehupenyu hwebhatiri.
5. Pamusoro pemakore gumi nemashanu hupenyu hwesherufu.
6. IP 68 dhizaini, kwenguva refu pasi pemvura kushanda.
7. Kubuda kwakarongeka ndeye RS485, Lora, NB-IoT, 4-20mA, Pulse, GPRS inogona kusarudzwa.